LANDA I-Pilatus PC-7 V2.0 FSX - Rikoooo
Usayizi 26.79 MB
Play 15 600
I model yokundiza namaqiniso, abanikeze asebenza nabo virtual kuqedile, kungcono omuhle add-on. Kufaka repaints eziyisishiyagalombili kanye tinkhulumo ezimbili: Swiss Air Force, Botswana Defence Force, Alaska State amaHlathi (kungenzeka ukulahla amathangi), Austrian Air Force, Abu Dhabi Air Force (UAE), US Civil Register (Benpuppy Tribute), Uruguay Air Force, angenalutho Metal.
I Pilatus PC-7 Turbo Trainer kuyinto ephansi wing ukuqeqeshwa Ngohlelo esihlalweni-aircraft, oluqanjwe Pilatus Aircraft of Switzerland. I izindiza okwazi konke ukuqeqeshwa imisebenzi eyisisekelo kuhlanganise aerobatics, instrument, tactical nobusuku ezindizayo. It likhethiwe engaphezu kwamashumi amabili air amabutho njengoba ab yabo initio trainer - kusukela esethulweni indiza ngo 1978 close to 500 baye bathengisa, iningi namanje enkonzweni.
Amahora angaphezu kwesigidi ziye zafinyelela PC-7s emhlabeni wonke.